နံနံပင်လေး ထည့်စားမယ် | Page 363 | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
မြန်မာလူမျိုး အများစုဟာ မုန့်ဟင်းခါး စားရင်ဖြစ်စေ၊ ဟင်းချက်ရင်ဖြစ်စေ နံနံပင်လေး ထည့်ချက်လေ့ ရှိကြပါတယ်။ မကြိုက်သူတချို့တလေ ရှိနိုင်ပေမယ့် နံနံပင်လေး ထည့်လိုက်မှ အနံ့ အရသာ ပိုကောင်းလာတယ်ဆိုတာ အများစုက လက်ခံထားကြပါတယ်။
အနံ့မွှေးရုံတင်မကဘဲ နံနံပင်ဟာ ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း ကောင်းပါတယ်။ နံနံပင်ရဲ့ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့ -
1. နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
2. ဆီးချိုသမားများအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။
3. စိတ်ဖိစီးမှု၊ စိတ်ပူပန်မှုကို သက်သာစေပါတယ်။
4. ရောဂါပိုးမွှားနှင့် မှိုရောဂါပိုးများကို သေစေနိုင်ပါတယ်။
5. ခန္ဓာကိုယ်မှ အဆိပ်အတောက်များကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။
6. နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်ပျော်စေပါတယ်။
Dr. Zero (www.drmyanmar.com)
၁၆.၈.၂၀၁၆ | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
မိမိမှာ သွေးချိုရောဂါရှိနေပြီလို့သိရှိရချိန်မှာ သွေးတွင်းသကြားဓာတ်စစ်တာ၊ သင့်လျော်တဲ့ အစားအစာရွေးချယ် စားသုံးရတာ၊ ဆေးမှန်မှန်သောက်သုံးရတာတွေလုပ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့အတွက် မိမိကိုယ်ကိုဂရုစိုက်ဖို့ကို အမှန်ပင် အားထုတ်ရတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲလိုဂရုစိုက်ပေးခြင်းဟာ မိမိကိုယ်ခန္ဓာမှာသွေးချိုရောဂါကြောင့်ြ...
ကော်ဖီမသောက်ဘဲ လက်ဖက်ရည်ကြမ်း သောက်ခြင်းဖြင့်ရရှိမည့် ကောင်းကျိုးများ
၁၅.၈.၂၀၁၆ | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
လုပ်ငန်းခွင်တွင်နိုးကြားနေစေရန်နှင့် ပင်ပန်းမှုများပြေပျောက်စေရန်ဟူသော အကြောင်းပြချက်များဖြင့် နေ့စဉ်ကော်ဖီသောက်သုံးနေသူ၊ ကော်ဖီစွဲနေသူများလည်း မနည်းလှပေ။ သို့ရာတွင် ကော်ဖီသောက်ခြင်း၏ ဆိုးကျိုးများအနေဖြင့် အိပ်စက်မှုပုံစံမမှန်ခြင်း၊ သွားအရောင်ပြောင်းခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်...